हालै मात्र नेपाल सरकारले प्रवासको यस्तो मरुभूमिमा रोजगाररत रहेका महिला घरेलु कामदारहरूलाई विदामा घर गएपछि पुनः आवतजावतमा प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरेपछि म लगायत यसरी विदेशी भूमिमा रोजगाररत रहेका हजारौँ महिलाहरूको ध्यान गम्भीर रूपमा ध्यान तानिएको छ । उक्त निर्णयप्रति घोर आपत्ति जनाउँदै युएई नेपाली एकता समाजको अगुवाइमा युएईमा कार्यरत रहेका हामी प्रवासी नेपाली महिलाहरूको प्रतिनिधि मण्डलले आबुधावीस्थित नेपाली दूतावास पुगेर दूतावास मार्फत् नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराइएको छ ।
हाल देशमा चली रहेको राजनैतिक सङ्क्रमण र त्यसबाट विदेशमा श्रम गरेर खाने व्यक्ति (विशेष गरी महिला) हरूलाई पर्न गएको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असरका बारेमा बोल्न मन लाग्यो । वास्तवमा कोही पनि ब्यक्ति रहरले विदेशमा आफ्नो रगत, पसिना बगाई रहेको छैन । सबैका आ–आफ्ना बाध्यता छन् । सबैलाई आफ्नो रगत, पसिना आफ्नो देशमा आफ््नो माटोमा सिञ्चिन मन छ सबैलाई । तर यी सब भावनात्मक कुरा हुन पुगेका छन् । देशमा रोजगारी छैन । भएको कलकारखाना दिनानुदिन बन्द हुँदै छ । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगार बाध्यता बनेको छ । हाम्रा लागि भनाँै, हामी नेपाली लागि र अर्को यथार्थ यो पनि हो कि वैदेशिक रोजगारीले आर्थिक रूपमा राज्यलाई धेरै टेवा पुगेको छ । विदेशबाट भित्रिने रेमिट्यान्सले देश चलेको छभन्दा अनर्थ नलाग्ला । हाmे यही रेमिट्यान्स पठाउने महिला दिदिबहिनीहरू बिदामा गएका बेलामा सरकारले अनेक नियम, कानुन लगाएर काममा फर्किन दिएको छैन । त्यसमा घोर आपत्ति प्रकट गर्दछु ।
कति सपनाहरू सजाएर बिदामा गएका दिदीबहिनीहरूको सपना टुक्राउने काम मात्रै गरेको छैन सरकारले, तिनीहरूबाट आश्रित परिवारको रोजिरोटी पनि खोसेको छ । देशमा बेरोजगारी सङ्ख्या पनि थपेको छभन्दा अनर्थ नलाग्ला । कि त सरकारले तुरुन्तै रोजगारी दिन सक्नु पर्‍यो, होइन भने ती महिला दिदीबहिनीको तुरुन्त श्रम स्वीकृत गरी काममा फर्किन सक्ने वातावरण बनाई दिनु पर्‍यो । होइन भने तिनिहरूको आश्रित परिवार र बालबच्चाको भरणपोषण र शिक्षादीक्षाको जिम्मा कसले लिन्छ ? विशेष गरी घरमा काम गर्ने महिलाहरू बिदामा गएको बेलामा एकाएक श्रम स्वीकृत रोकेर सरकारले ठुलो अन्याय गरेको छ ।
हो, खाडीमा भिजिट भिसामा आएर कति अलपत्र परेका होलान् र कति घरमा काम गर्ने घरेलुु कामदार पनि पीडामा परेका होलान ? नहोला भन्ने होइन तर भिजिट भिसा बन्द गरेर अनि, घर बिदामा गएका घरमा काम गर्ने महिलाहरूलाइ नेपालमा रोक्नु नै समस्याको समाधान हो ? सम्बन्धित निकायसँग जान्न खोज्दा घरेलु कामदारका लागि सम्झौता भएको छैन । कानुन पनि पास भएको छैन । त्यसैले रोकिएको भन्ने जबाफ आउँछ । तर देशका बारेमा कुनै पनि निर्णय गर्दा छेपारोले रङ फेरेको जस्तो निर्णय फेर्न सक्ने सरकार किन निमुखा कामदारको रोजिरोटी खोस्न यति क्रुरतापुर्ण रूपमा प्रस्तुत हुन्छ । आफ्नो फाइदाका लागि ५ मिनेटमा कानुन बनाउन सक्ने सरकारले त्यही कानुनलाई ढडिया बनाएर सिधासाधा जनतालाई किन पासोमा पार्दै छ ?
देशमा भूकम्प गएको २ बर्ष बिती सकेको छ । भूकम्प पीडितले राहतको महशुस गर्न पाएका छैनन् । अहिलेसम्म पालामा जिन्दगी गुजार्दैछ्न भूकम्प पीडितहरू । गाँस, बास, कपासको व्यवस्था गर्न सकेको छैन सरकारले । राहतका सामग्रीहरू सबै हिनामिना भई सकेको छ । यस्तो कुरामा किन ध्यान दिदैन सरकार । निर्णय गर्दा सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाएर स्थिति नियन्त्रणमा लिएर कस्तालाई भिसा दिने कस्तालाई नदिने, अनि, घरेलु कामदारका लागि कसरी सम्झौता गर्ने र समस्या समाधान कसरी गर्ने भन्नेतिर लाग्ने कि भिसा बन्द गरेर भई रहेको रोजगारी खोसी दिने ? सरोकारवाला निकायले यो बुझ्न जरुरी छ कि हालसम्म खाडीमा आएर अलपत्र पर्ने सबै दलालहरूबाट आएका मात्र छन् । ती दलालहरूको सिधा सम्पर्क भनौँ वा साँठगाठ सरकारको कर्मचारीसँग छ या भनौँ सरकारसँग छ । कर्मचारी तन्त्र दलालको दलदलमा फसेपछि अब कसले गर्छ दलालगिरी नियन्त्रण ? यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् ।
यदि खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार बन्द गरेको खण्डमा त्यसको असर सबैभन्दा धेरै युएईमा रोजिरोटीका लागि श्रम गर्ने कामदारमा पर्ने निश्चित छ । तर खाडी मुलुकमा सबैभन्दा सुरक्षित युएई भएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु । कुनै पनि औलामा रोग लाग्दछ भने उपचार गर्ने हो भएन भने बल्ल एउटा औला काट्ने हो तर सरकारले त औलामा सानो घाउ देखेर हात नै काटेर फाली दिएको भान भएको छ । हो, पीडामा परेकाहरूलाई मल्हम लगाउनु पर्दछ । तर पीडामा परेको त यसै पर्‍यो पर्‍यो तर सरकार भने तिनीहरूलाई मल्हम लगाउनु त कता हो कता, उल्टो घरको गर्जो टार्नका लागि रोजिरोटी चलाउनका लागि राम्रोसँग काम गरी रहेका महिलाहरूको रोजगारी खोसेर झन् पीडा थप्दै छ । यसमा पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् ।
अन्त्यमा, कुनै पनि व्यक्ति यदि रोजगारीको सिलसिलामा पीडामा परेको छ भने घर गई सकेपछि फेरि रोजगारीमा फर्किन पाऊँ भनेर भन्छ ? यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई रोजगारीका लागि किन प्रतिबन्ध लाउन खोजिदै छ ? यो विषयमा सबै विस्तृत रूपमा आबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासलाई ज्ञापन पत्र बुझाई सकेको छ । अझै पनि हाम्रो आवाज नसुनिएमा र एउटा श्रमजीवी कामदारको रोजिरोटी खोसिने अवस्था आएमा हामी युएईमा रोजगाररत रहेका हजारौँ महिलाहरू मिली नेपाली दूतावास घेरा हाल्न बाध्य हुने छौँ । दूतावास मात्र होइन, नेपाल पुगेर श्रम मन्त्रालय र सिंहदरवार अगाडि नै धर्ना बस्न पनि बाध्य हुने छौँ । हामी चाहन्छौँ– देशमा त्यस्तो स्थितिको सृजना नहोस् । यसमा सम्बन्धित निकायको समयमै ध्यानाकर्षण होस् । (लेखिका युएई नेपाली एकता समाज, महिला विभागकी सल्लाहकार सदस्य हुनु हुन्छ ।)